Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo safar aan la ogeyn ugu tagay ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo safar aan la ogeyn ugu tagay ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya
March 18, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Madaxweyne Uhuru Kenyata. [Xigashada Sawirka: Standard Digital]
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta oo Sabti ah safar aan horey loo sheegin ku tagay gudaha Soomaaliya si uu kulan u la yeesho ciidamada difaaca Kenya (KDF) ee ka tirsan Howlgalka Midowga Afrika (AMISOM) ee saldhiga milatari ku leh deegaanka Dhoobley ee u dhow xadka Kenya.
Madaxweyne Uhuru sidoo kalena ah taliyaha ciidamada qalabka sida ee Kenya ayaa isaga oo ku labisan dharka tuutaha ciidamada Kenya kulan la yeeshay ciidamada dalkiisa ee ku sugan halkaas, waxaana uu uga mahadceshay sida ay naftooda ugu hureen difaaca dalkooda hooyo.
Madaxweynaha ayaa u sheegay askarta in Kenya ay uga mahadcelinayso dagaalka ay kula jiraan khatarta Al-Shabaab.
“Joogitaankiina halkan gudaha Soomaaliya waxay badbaadisay nafaf badan, Kenya mar walba waa ay idiin kaga mahadcelinaysaa. Joogitaankiina halkan ugu yaraan waxay dadka ka xoreysay baqdinta Al-Shabaab,” ayuu yiri Madaxweyne Uhuru.
Waxa uu ku daray: “Waxaanu lasoo noqonay howlihii dalxiiskeena waxaan uga mahadcelinaynaa waa idinka sida aad u sugaysaan dalkeena,”
Uhuru ayaa sheegay in marka Soomaaliya ay yeelato ciidamo adag ay ciidamada Kenya dib ugu noqon doonaan dalkooda.
“Waxaanu kala hadlaynaa dowladda cusub ee Soomaaliya in ay muhiimada siiyaan dhismaha ciidamadooda sidaa darteed waxaad dib ugu soo noqon doontaan dalkiina. Taasi waa istiraatiijiyadayada bixitaanka,” ayuu yiri Madaxweyne Kenyata.
Kenya ayaa ciidamo ka badan boqol askari ku weyday labo weerar oo ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadeen saldhigyo miltari oo ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Cade ee gobolka Gedo iyo deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose, weeraradaas ayaa dhacay bishii Janaayo ee sanadkii lasoo dhaafay 2016-ka iyo bishii Janaayo ee sanadkan 2017-ka.
March 30, 2018 Dhismaha derbiga xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo si kumeelgaar ah loo joojiyay
August 28, 2018 Uhuru Kenyatta oo sheegay in ciidamada Kenya aysan ka bixi doonin gudaha Soomaaliya
February 22, 2017 Hoggaamiyaasha wadamada deriska ah oo yimid Muqdisho si ay uga qaybgalaan caleemo-saarka Madaxweyne Farmaajo
August 11, 2017 Uhuru Kenyatta oo dib loogu doortay madaxweynenimada Kenya
Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Moussa Faki oo Muqdisho yimid
Soomaaliya oo ku eedaysay xulufada Sucuudi Caraabiya hoggaamiyo duqeyn loo geystay dooni oo ay ku dhinteen qaxooti Soomaali ah
Cutubyo ka socda ciidamada AMISOM oo la geeyay magaalada Cadaado
Cadaado-(Puntland Mirror) Cutubyo kamid ah ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika (AMISOM) ayaa gaaray magaalada Cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Galmudug, sida ay tebisay wakaalada wararka dowlada federaalka Soomaaliya ee Muqdisho. Sida ilo-wareedyo [...]
Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Beledweyne
Beledweyne-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay kadib markii qof qarax isku soo xiray uu isku qarxiyay makhaayad kutaala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan maanta oo Axad ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo [...]